Mashandisiro aungaita Netflix paSky Q
Netflix yave kuwanikwa pa Sky Q kwemakore maviri apfuura. Pane nzira dzinoverengeka dzaunokwanisa kuwana iyo yekufambisa sevhisi pane yako Sky Q bhokisi, izvo zvinogona kuvhiringa zvishoma pakutanga.
Saka heino gwara rinobatsira rekuti Netflix inoshanda sei paSky Q.
Chii chinonzi Sky Q, zvinoda marii uye ndingaiwana sei?
Ndinofanira kuva neNetflix account here?
Kuti ukwanise kuwana zveNetflix pane Sky Q bhokisi iwe uchada yeNetflix account, ingave iripo kana nyowani. Nekudaro, iwe unogona kusaina kune iyo Sky pachayo Ultimate On Demand package, iyo inosanganisira yakazara Netflix kuwana.
Ese maakaundi eNetflix anogona kuwana zvemukati kuburikidza neSky, asi zvichienderana nepasuru yako unowana akasiyana mabhenefiti:
Iripo kana itsva Netflix account kuburikidza neNetflix pachayo (kana mumwe mupi)
Kana iwe ukashandisa yakaparadzana Netflix account iwe unokwanisa kushandisa yakatsaurwa yeNetflix app paSky Q papuratifomu. Inoshanda uye inotaridzika chaizvo seNetflix app pane mamwe akawanda mapuratifomu, kusanganisira Smart TVs, Amazon Moto TV uye Apple TV.
Nyowani kana iripo yeNetflix account kuburikidza neSky Ultimate On Demand package
Kana iwe ukabhadharira Netflix kuburikidza neSky's nyowani-mu-imwe yekubhadhara pasuru, iwe uchiri kukwanisa kuwana iyo Netflix app paSky Q sepakutanga, asi nebhonasi yakawedzerwa yeNetflix yemukati inosanganiswa neiyo yakazara Sky Q chiitiko futi.
Wona zvinopihwa paSky's Ultimate On Demand package pano
Semuenzaniso, mamwe maratidziro eNetflix achaonekwa paSky Q skrini yekumba pamwe nemamwe "Top Picks" kubva kuSky's chiteshi nemabhokisi seti. Iwe unodzvanya pavari uye ivo vanobva vavhura iyo yakakodzera chikamu paNetflix uye tamba.
Ndizvo zvimwe chete neRamba Wakatarisa chikamu, icho chinozosanganisira Netflix inoratidza iwe uri chikamu-nzira kuburikidza.
The On Demand menu chikamu chine nzvimbo yakatsaurirwa yeNetflix, iyo inokupa iwe kugona kushandura Netflix profiles kana kutanga zvemukati kubva kune akawanda ekurudziro mabara.
Kutsvaga mameseji paSky Q kunosanganisirawo mibairo inowanikwa paNetflix.
Izvi zvakafanana kunyangwe ukasaina kuNetflix kekutanga kuburikidza neSky kana ukachinja account yako iripo. Muchiitiko chekupedzisira, iwe unongoda kuudza Sky kero yeemail inowana yako Netflix account uye makambani maviri aya anochinja iwe otomatiki uye ipapo ipapo. Iwe haungarasikirwe chero profiles kana Netflix nhoroondo.
Ini ndinoda Netflix Premium?
Kana iwe uine account yeNetflix iripo uye usingade kuichinjisa kuSky's vhezheni, unogona kuwana iyo Netflix app zvisinei kuti ndeupi rudzi rwekunyoreswa kweNetflix yaunayo: Basic, Standard kana Premium.
Kugadziriswa uye nhamba yemidziyo yekutepfenyura panguva imwe chete inotenderwa pane imwe neimwe yeayo yakafanana neyakarongwa paNetflix saiti (kureva. nzizi mbiri dzakabatana kusvika HD yeStandard, ina kusvika ku4K yePrimum).
Kana iwe ukasaina kuSky's Ultimate On Demand package mhando yeNetflix yekunyorera yaunowana zvinoenderana nekunyoreswa kwako kweSky Q.
Kana iwe uine Sky Q Entertainment kunyoreswa uye 1TB bhokisi iwe unowana Netflix Standard nhengo (nzizi mbiri muHD). Kana iwe uine Sky Q Chiitiko (yaimbozivikanwa seQ Multiscreen) kunyoreswa nebhokisi re2TB, unowana nhengo yeNetflix Premium (nzizi ina inosvika Ultra HD).
Iyo package yakafanana mumutengo zvisinei kuti ndeipi Sky Q kunyoreswa kwaunayo.
Marii Netflix paSky Q inodhura?
Sky's Ultimate On Demand package inodhura £26 pamwedzi
Nezve izvo, iwe unowana Netflix (ine ingave Yakajairwa kana Yekutanga yekuwana zvichienderana neyako yese Sky Q kunyoreswa - sepamusoro). Uye iwe zvakare unowana mukana kune Sky Bhokisi Sets.
Ko Sky Ultimate On Demand Netflix account inoshandawo pane mamwe maturusi?
Kunyangwe iwe ukabhadharira yako Netflix kuburikidza neSky ichiri kushanda sekunyoreswa kwakamira. Izvi zvinoreva kuti unogona kupinda nekunakidzwa neNetflix pane chero chishandiso chine Netflix app, pamwe nePC kana Mac kuburikidza newebhu browser.
Ndingawana Netflix kuburikidza neSky + bhokisi?
Zvinosuruvarisa, hapana zvirongwa zveNetflix app kana kubatanidzwa kweiyo yekare Sky + bhokisi. Senguva dzose, Sky inotarisira kuti ichakurudzira vanyoreri veSky + kuti vasimudzire.
Ko Netflix inoratidza inoonekwa mune zvandinokurudzira?
Kana iwe uine Sky Ultimate On Demand kunyoreswa iwe unowana Netflix zvemukati zvinoonekwa munzvimbo dzinoverengeka pamapeji ako ekumba eSky Q.
Kunyangwe iwe ukadzvanya bhatani reKumba uye wovhura iyo Sky Q hub uchaona Netflix inoratidza, seThe Crown uye Stranger Zvinhu, inoonekwa muTop Picks njanji kumusoro, padivi peSky's zvemukati.
Mukuwedzera, Netflix inoratidza ichaonekwa mu "Ramba Wakatarisa" njanji.
Zvinokurudzira zvichaonekwawo kumberi uye pakati peiyo yakatsaurirwa Netflix hub mune On Demand menyu.
Mashoo anofambiswa mu4K HDR?
HDR inotsigirwa kuburikidza neSky Q, asi iwe uchafanirwa kuve neHDR-inokwanisa Sky Q bhokisi, HD uye Ultra HD kana Sky Q Experience kunyoreswa, HDR-inokwanisa TV inotsigira HDR (HLG fomati) uye ibatidzwe. , pamwe chete negadziriso yemifananidzo pabhokisi rako reSky Q rakaiswa ku2160p UHD uye gumi-bit. Kana iwe usina chokwadi kana bhokisi rako reSky Q richitsigira HDR, unogona kutarisa bhokisi raunaro pano.
Yese HDR inokwanisa pane zvinodiwa zvemukati ine "HDR" icon saka inokubatsira iwe kuiona zviri nyore. Izvi zvirimo parizvino zvinosanganisira mamwe maSky Nature anoratidza, kusarudzwa kweSky Originals, kusarudzwa kwemabhaisikopo e blockbuster, Disney + uye Netflix.
Zviripo zvinongoridza muHDR chero bhokisi rako rakagadzirirwa UHD (10-bit) uye TV yako ine HDR kuseta yakabatidzwa.
Chii chinonzi Hybrid Log Gamma uye nei uchifanira kuva nehanya?
Ndinogona here kurodha Netflix inoratidza kuSky Q bhokisi?
Kusiyana neSky Box Sets uye imwe pa-inoda TV iwe hautore Netflix inoratidza kana mafirimu kuSky Q bhokisi rako. Iko hakuna kwakawanda poindi, kuve akatendeseka, uye kutepfenyura kunochengetedza nzvimbo yako yekuchengetera marekodhi uye zvimwe zvakadhawunirodha kubva kumwe kunhu. Inoshanda semamwe maapplication ekutepfenyura paSky Q bhokisi.
Maprofiles angu eNetflix achiri kushanda here?
Haisi chete maficha ako eNetflix achiri kushanda, asi anoverengerwa muSky Q chiitiko kana iwe ukanyorera kune Ultimate On Demand.
Zvinokurudzira zveNetflix zvinoratidzwa mukati meSky Q mapeji zvinoenderana neiyo yekupedzisira mbiri yakasainwa kuburikidza neNetflix Sky Q app. Uye iwe unogona kutoona yazvino inotungamira mbiri mune yepamusoro njanji pane yakatsaurwa yeNetflix chikamu cheiyo On Demand nharaunda.
Dzvanya pane izvo uye iwe unogona kushandura chimiro kune imwe - kusanganisira chimiro chemwana icho chinozongokurudzira Netflix inoratidza mukati meSky Q inoenderana nezera ravo.
Ko Sky inogovera zvandinoona kana zvandinoda neNetflix?
Denga rine yaro sarudzo dzemunhu paSky Q uye neyayo algorithms yekusimudzira hurongwa maererano nemaitiro ako ekuona. Netflix inoita zvimwe chetezvo.
Asi avo vari kunetseka nezve data ravo havafanire kunetseka. Iwo makambani maviri anochengeta maitiro ako ekuona akasiyana. Muchokwadi, iyo chete ruzivo nezve iwe yavanogovana ndeye yako yeNetflix account email kero paunotanga kuchinja kubva kune yakajairwa, yakamira kunyoresa kuUltimate On Demand.
Kunyangwe izvo hazvigovaniswe kana ukasachinja account yako.
Sky Q matipi nemano: Kuwana zvakanyanya kubva kuFuidhi Kuona uye yako Sky Q bhokisi
Sky Q matipi uye matipi: Kuwana zvakanyanya kubva kuSky Q bhokisi rako
Zvino TV vs Sky Q: Ndeipi Sky package iri yakakodzera iwe?
Sky Glass wongororo: Yekutanga TV yeSky inopotsa chiratidzo
Akanakisa eku UK ekushambadzira masevhisi 2020: Disney +, Netflix, Amazon Prime Vhidhiyo, Zvino TV, Britbox uye zvimwe
MaNetflix matipi uye manomano: Maitiro ekugona yako binge-yekutarisa chiitiko